Daniel 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
3 Ɔhene Nebukadnesar yɛɛ sika honi+ bi a ne tenten yɛ basafa aduosia, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa asia, na ɔde sii Dura asasetaw so wɔ Babilon mantam no mu.+ 2 Na Ɔhene Nebukadnesar somae sɛ wɔnkɔfrɛfrɛ amantam asoafo, atitiriw+ ne amradofo, afotufo, afotosanfo, atemmufo, polisifo mpanyimfo,+ ne amantam no so ahwɛfo nyinaa, na wɔmmra guabɔ+ a ɔhene Nebukadnesar de rehyira ne honi so no ase. 3 Ɛnna wɔkɔfrɛfrɛɛ amantam asoafo,+ atitiriw ne amradofo, afotufo, afotosanfo, atemmufo, polisifo mpanyimfo, ne amantam no so ahwɛfo nyinaa behyiae sɛ wɔrebehyira ohoni a ɔhene Nebukadnesar de asi hɔ no so, na wobegyinagyinaa ohoni a Nebukadnesar de asi hɔ no anim. 4 Na ɛsɛn+ bi teɛɛm denneennen sɛ: “Mo, nkurɔfo, aman ne kasa horow,+ wɔka kyerɛ mo sɛ, 5 sɛ mote abɛn, odurugya, sambuka sanku, sankuwa, sanku, atɛntɛbɛn ne nnwonto nneɛma horow nyinaa nnyigyei a,+ mummutubutuw fam nsom sika honi a Ɔhene Nebukadnesar de asi hɔ no. 6 Na obiara a ɔremmutuw fam nsom+ no no, dɔn no ara mu,+ wɔde no bɛto fononoo a ogya refram mu no mu.”+ 7 Ɛno nti, bere a aman no nyinaa tee abɛn, odurugya, sambuka sanku, sankuwa, sanku, ne nnwonto nneɛma horow nyinaa nnyigyei no ara pɛ, aman,+ nkurɔfo ne kasa horow no nyinaa butubutuw fam som sika honi a Ɔhene Nebukadnesar de asi hɔ no. 8 Saa bere no ara mu, Kaldeafo bi baa ɔhene nkyɛn bɛtotoo Yudafo+ no ano. 9 Wɔbɛka kyerɛɛ Ɔhene Nebukadnesar sɛ: “O ɔhene, nya nkwa daa.+ 10 Wo ɔhene, wo na woahyɛ mmara sɛ onipa biara a ɔbɛte abɛn, odurugya, sambuka sanku, sankuwa, sanku, atɛntɛbɛn ne nnwonto nneɛma horow nyinaa nnyigyei no,+ ommutuw fam nsom sika honi no, 11 na nea wammutuw fam ansom no no, wɔde no bɛto fononoo a ogya refram mu+ no mu. 12 Yudafo bi wɔ hɔ a wode wɔn asisi hɔ sɛ wɔnhwɛ Babilon amantam so,+ Sadrak, Mesak ne Abednego; ɔhene, saa mmarima yi mmu wo; wɔnsom w’anyame, na sika honi a wode asi hɔ no nso, wɔnsom no.”+ 13 Ɛnna Nebukadnesar de abufuw ne anibere+ kae sɛ wɔnkɔfa Sadrak, Mesak ne Abednego+ mmra. Enti wɔkɔfaa mmarima yi baa ɔhene anim. 14 Na Nebukadnesar bisaa wɔn sɛ: “Sadrak, Mesak ne Abednego, ɛyɛ ampa sɛ muse morensom m’anyame,+ na sika honi a mede asi hɔ no nso, morensom no?+ 15 Afei de, sɛ moasiesie mo ho sɛ bere a mobɛte abɛn, odurugya, sambuka sanku, sankuwa, sanku, atɛntɛbɛn ne nnwonto nneɛma horow nyinaa nnyigyei no,+ mubebutuw fam asom ohoni a mayɛ no a, eye. Na sɛ moansom no a, dɔn no ara mu, wɔde mo begu fononoo a ogya refram mu no mu. Na onyame bɛn na obetumi agye mo afi me nsam?”+ 16 Ɛnna Sadrak, Mesak ne Abednego buaa ɔhene sɛ: “O Nebukadnesar, enhia sɛ yebebua wo eyi ho asɛm bi.+ 17 Sɛ ɛba saa a, yɛn Nyankopɔn a yɛsom no no betumi agye yɛn. Obeyi yɛn afi fononoo a ogya refram mu no mu, na obegye yɛn afi wo, ɔhene nsam.+ 18 Na sɛ amma saa mpo a, ɔhene, yɛpɛ sɛ wuhu sɛ ɛnyɛ w’anyame na yɛbɛsom wɔn, na sika honi a wode asi hɔ no nso, yɛrensom no.”+ 19 Ɛnna Nebukadnesar bo fuw Sadrak, Mesak ne Abednego, na n’anim tebea sakrae. Na ɔkae sɛ wɔmma fononoo no nnɔ mpɛn ason nkyɛn sɛnea daa ɛdɔ no. 20 Na ɔhyɛɛ mmarima ahoɔdenfo+ bi a wɔka n’asraafodɔm ho sɛ wɔnkyekyere Sadrak, Mesak ne Abednego nkɔtow wɔn ngu fononoo a ogya refram mu no mu.+ 21 Ɛnna wɔkyekyeree mmarima yi, wɔn ntwontwo, wɔn ntade ne wɔn abotiri ne wɔn ntama mu, na wɔtow wɔn guu fononoo a ogya refram mu no mu. 22 Esiane sɛ na ɔhene asɛm no mu yɛ den, na fononoo no adɔ aboro so nti, mmarima a wɔde Sadrak, Mesak ne Abednego kɔe no, ogyaframa no kunkum wɔn. 23 Na mmarima baasa yi, Sadrak, Mesak ne Abednego a wɔakyekyere wɔn no hwehwee fononoo a ogya refram mu no mu.+ 24 Ɛnna ɔhene Nebukadnesar koma tui, na ɔyɛɛ ntɛm sɔree. Na obisaa n’ahemfie mpanyimfo no sɛ: “Ɛnyɛ mmarima baasa na yɛkyekyeree wɔn tow wɔn guu ogya+ no mu?” Wobuaa ɔhene sɛ: “Ɛyɛ ampa, ɔhene.” 25 Ɔno nso kae sɛ: “Hwɛ! Mihu mmarima baanan a wɔasan wɔn sɛ wɔnenam ogya no mu, na wɔn ho ntɔɔ kyima, na nea ɔto so anan no hwɛbea te sɛ anyame+ ba bi.” 26 Ɛnna Nebukadnesar bɛn fononoo a ogya refram mu+ no ano. Na ɔkae sɛ: “Sadrak, Mesak, ne Abednego, Ɔsorosoroni Nyankopɔn+ no nkoa, mumfi adi mmra!” Na Sadrak, Mesak, ne Abednego fii adi fii ogya no mu bae. 27 Na amantam asoafo, atitiriw ne amradofo ne ɔhene mpanyimfo+ a wɔahyia no hwɛɛ mmarima yi, na wohui sɛ ogya no annya wɔn nipadua so tumi,+ na wɔn ti so nhwi+ ho anka, na wɔn ntwontwo mpo ansakra, na ogya no hua nso annye wɔn ho. 28 Nebukadnesar kae sɛ: “Nhyira nka Sadrak, Mesak, ne Abednego Nyankopɔn no;+ ɔno na wasoma ne bɔfo+ ma wabeyi ne nkoa a wɔde wɔn ho too no so+ na wɔsakraa ɔhene asɛm na wɔde wɔn nipadua mae no, sɛnea ɛbɛyɛ na wɔrenkotow+ nsɔre+ onyame biara sɛ wɔn Nyankopɔn no nko.+ 29 Na mehyɛ mmara+ sɛ aman, nkurɔfo ne kasa horow nyinaa mu no, obiara a ɔbɛka Sadrak, Mesak ne Abednego Nyankopɔn ho abususɛm no, wobetwitwa ne mu asinasin,+ na wɔadan ne fie agyananbea,+ efisɛ onyame bi nni hɔ a obetumi agye onipa sɛ oyi.”+ 30 Ɛnna ɔhene ma esii Sadrak, Mesak ne Abednego yiye wɔ Babilon mantam no mu.+